Zimbabwe: Mining Firms Push for Power Tariff Reduction - allAfrica.com
Zimbabwe: Mining Firms Push for Power Tariff Reduction
Power utility Zesa Holding's average electricity charge stands at 9,83 cents/kWh, which has prevailed since the last tariff adjustment in 2012.
The Zimbabwe Energy Regulatory Authority declined Zesa's proposal to increase the power tariff by 49 percent in August this year, which would have seen the tariff jumping to 14,69 cents/kWh.
"When you prioritise your foreign exchange, you also have to prioritise your energy costs in terms of propping up those who generate the forex," he said.
Foreign exchange is the lifeblood of Zimbabwe's economy, which relies on a basket of currencies dominated by US dollar, after the country scrapped its unit in 2009 due to effect of high inflation.
The mining sector is also of strategic importance to Zimbabwe, as it accounts for over half of the country's foreign exchange inflows.
Mining accounts for nearly $2 billion of Zimbabwe's $3,5 billion annual export earnings, with gold raking in over half a billion dollars of that.
Zimbabwe's electricity requirement stands at about 1 400 megawatts, at peak period of demand, but is able to generate an average of 1 000MW due to constrained generation capacity.